Tageerayaasha Col. C/laahi Yusuf oo ku han weyn inuu Col. Barre Hiiraale uu soo galo Gacantooda ayaa ogolaaday dhexdhexaadinta looga yaboohay Kismaayo
Buluugleey, November 28, 2005
Xubnaha garabka Jowhar ee taageersan siyaasada Col. C/llahi Yusuf ayaa isku raacay in ergo dhexdhexaadina loo dirsado magaalada Kismaayo. Sidoo kale waxey soo jeediyeen in Kismaayo kadib in dhexdhexaadinta lagu soo xiro Jowhar.
Waxaa waayahan soo baxayey khilaaf xoogan oo ka taagan cidda ka qeybgaleysa shirka Kismaayo iyo kharashka baxaya sida loo bixinayo. Waxaa kaloo muran xoogan uu ka taagnaa sidii loo qancin lahaa siyaasiyiin badan oo aan raali ka ahayn shirka loo aadayo Kismaayo.
Waxaa Kismaayo loo aadayo ma ahan in la helo dhexdhexaadin laakiin waxey u muuqataa sidii Barre hiiraale loola gorgortami lahaa si uu u soo raaco bahweynta u horkacayo Col. C/llahi Yusuf. Barre Hiiraale isaguna wuxuu daneynayaa lacag uu ku helo shirkaas, laakiin kama dhaadhacsana inuu taageeero u noqdo ninkii ay dowladii Siyaad Barre ka dhismi weysey.
Waxaa cid walba ay la yaaban tahay sida garabka Jowhar ay ugu heelan yihiin safarka dheer oo ay u aadayaan Kismaayo iyadoo Xamar oo aad ugu dhow ay ka soo horjeedaan tegideeda. Waxaa arrintaas loo macneyn karaa ineysan muuqan tanaasul ka soo socda kooxda Jowhar, xalkooduna uu yahay in xoog lagu kala baxo.
Heshiiska waxaa soo jeediyey Barre Hiiraale isaga ayeyna u taal tala soo jeedin haddii labada dhinac ay wada aqbalaan iney Kismaayo ku kulmaan meesha xigta ee uu doonayo inuu ku dhameystiro wadahadlka, laakiin ma ahan go’aan ay iska leeyihiin garabka Jowhar iney wakhtiga iyo inta jeer oo la shirayo ama meesha labaad ee lagu shirayo go’aamiyaan. Sidoo kale ergooyinka labad garab wadahadalkooda ayaa lagu go’aamin kara sidii loo dhameyn lahaa arrimaha la xiriira wadaxajoodka iyo sida loo qorsheynayo qaabka uu u socon doono shirka.
Qorshaha ay la soo boodayaan kooxda Jowhar wuxuu tusaaleynayaa kelitalisnimo iyo in shirka labaad oo ay ku doonayaan iney ku soo gabagabeeyaan Jowhar uu yahay mid qiyaamo oo ay ku damacsan yihiin iney caalamka ugu sheegan iney dhamaatay isheysadkii, garabkooduna uu ku adkaaday gabagabadii dhamaadka shirka. Sidoo kale waxaa laga yaabaa in kooxaha shirka labaad u soo aada Jowhar lagu xayiro magaladaas ineysan ka bixin mar dambe, taas oo aysan ka gilgilan Karin xildhibaanada tabarta yar laakiin aan ku fikirka ahayn garabka Jowhar.
Waxaa sidoo kale meesha ka muuqata in raga is khilaafsan aysan kulmeynin, laakiin dadka u dhexeeya ay u heelan yihiin shirkaas ku dhisan is calool baarka. Kooxda Muqdisho ayaan marna laga yaabin iney tuulooyinka Soomaaliya u aadaan shir looga dan leeyahay inaan Xamar marna la isugu imaan. Sidoo kale Col. C/llahi ayeeysan isna u muuqan kullan lagu heshiiyo oo Xamar ku soo dhamaada. Marka waxaa iska cad in koox walba ay joogeyso meesheeda xataa haddii gacmaha la isgeliyo oo la heshiiyo, taas oo ah sida ay doonayaan iney maqashiiyaan adduunka. Marka waxaa la isweydiinaya Jowhar iyo Kismaayo waxa la isugu afgartay in lagu shiro, Xamarna laga warwareegto. Miraha ka soo dhalanaya shirkaas ma ahan mid Xamar laga cuni doono ama waxtar u keenaya ummadda Soomaalida, gaar ahaan dadweynaha degan koofurta Soomaaliya.
hadda ka hor ayaa waxaa shirar badan lagu qabtay wadanka dibediisa, taasna waxaa ka soo shaqeeyey kooxihii dagaalkii Xamar looga xoog roonaaday. waxaana halheys u ahayd waa dhamaaday shir dambe oo Soomaalida loo qabanayo, beesha caalamkuna waa ka daashey shirarka macno la'aanta ah, kana waa kii ugu dambeeyey oo ma jiro shir dib dambe loo qabanayo iyo wax la mida. Sidoo kale waxaa tuulooyinka loogu shirayo waa in sidaas oo kale la suurtogeliyo in shirar badan lagu qabtay guddaha Soomaaliya, shir dambena aan la qabaneyn, inta badana ay heshiisey. Waxaa shirarka dibeda iyo kuwa gudaha loo maareeyey inaan Xamar la siin miisaanka ay leedahay. kooxda Jowharna haddii laga yeelo waxey ku joogaan wadadaas qaloocan.